के रे, अर्जेन्टिना बाहिरियो रे ? « नेपाली मुटु
« यो विश्वकपकै कठिन खेल, के भयो टाइब्रेकरमा
सेमिफाइनलमा युरोपियन बर्चश्व/स्पेन पनि सेमीमा »
खेल हेर्दा लाग्थ्यो अर्जेन्टिनाका खेलाडीहरु खाली संख्या पु¥याउँन मात्रै मैदानमा आएका हुन् ।नठाटी एकै शब्दमा भन्दा लाजै भयो नि । तपाईलाई चै कस्तो लाग्यो त ?
यस्तो भयो खेल :-
जर्मनीका स्क्वेनस्टाइगर खेलको तेस्रो मिनेटमा पाएको फ्रिकिकलाइ घुमाउरो पाराले प्रहार गरेकोमा जर्मनीका मुलरले टाउकोव्दारा गोल प्रहार गरेका थिए। त्यसपछी दुबैले बिस्तारै खेलेका थिए। मध्यान्तरसम्म मिडफिल्डमा अर्जेन्टिना भन्दा जर्मनीले खेलमा बढी नियन्त्रण राखेको थियो। खेलको ११ औं मिनेटमा अर्जेन्टिनाका ओटामेन्डीले पहेलो कार्ड पाएका थिए। खेलको १४ औं मिनेटमा जर्मनीले अर्को मौका पाएको भएता पनि गोल भने हुन सकेन। खेलको ३५ औं मिनेटमा जर्मनीको डी बाहिर हातले बल छोयपछी मुलरले पहेलो कार्ड पाएका थिए। अब मुलरले जर्मनी सेमीफाइनलमा खेल्न पाउने छैन। मध्यान्तरको केही अगाडी अर्जेन्टिनाले केही राम्रा आक्रमकहरू गरेको थियो तर गोल भने गर्न सकेन। आजको खेलमा अर्जेन्टिनी कोच माराडोना निकै हतास देखिएका थिए।
मध्यान्तर पछाडी अर्जेन्टिनाले राम्रो शुरूवात गरेको थियो। खेलमा जर्मनीले रक्षात्मक खेल खेल्न थाले पछी अर्जेन्टिनाले निकै आक्रमक खेल खेलेको थियो तर गोल भने गर्न सकेन। पछी जर्मनी खेलमा एकतर्फी रूपले हावी भएको थियो। यस पछी खेलको ६८ औं मिनेटमा जर्मनीले काउन्टर आक्रमणमा पोडोस्कीको पासमा मिलोस्लाभ क्लोजले जर्मनकालागि दोस्रो गोल गरेका थिए। यसको लगत्तै ७४ औं मिनेटमा जर्मनीका तर्फबाट अर्को आक्रमणमा फ्रेडिक्सले जर्मनकालागि तेस्रो गोल गरेका थिए। फेरी खेलको ८९ औं मिनेटमा जर्मनीले काउन्टर आक्रमणमा मिलोस्लाभ क्लोजले जर्मनकालागि चौठो गोल गरेका थिए।
This entry was posted on July 3, 2010 at 10:32 pm	and is filed under विश्वकप बिशेष. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.